Adeegyada Nafaqada FAQ | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waxaan ku haynaa nidaam xisaabinta qadada kombuyuutarka kombuyuutarrada oo dhan. Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa sidii nidaam bangi oo maxalli ah oo loogu talagalay ardayda.
Marka cunugaada laga diiwaangeliyo Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, koontada qadada ayaa si toos ah loogu sameeyaa ilmahaaga. Lambarka badhanka ilmahaaga waxaa laga heli karaa koontadaada Helitaanka Qoyska ee Skyward oo hoos timaada Adeegga Cuntada. Inta lagu jiro waqtiga cuntada, ardayda waxay soo mari doonaan qadka, waxay ku qorayaan nambarkooda kumbuyuutar waxayna ku sheegayaan magacooda qasnajiga. Koontada ardayga waxay ku imaan doontaa shaashadda kumbuyuutarka khasnajiga iyadoo qiimaha cuntada ama iibsashada la carte laga jari doono koontada ardayga.
Lacagaha qadada ee khadka tooska ah
E-mayllada Ogaysiinta Miisaanka Yar
Lacag Qado Aan La Bixin Karin
Lacagta qadada waxaa lagu bixiyaa marinka Skyward Family Access iyadoo la adeegsanayo magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah ee My SSO. Magacaaga isticmaale iyo lambarkaaga sirta ah ayaa emayl lagaa soo diri doonaa Family Helpdesk. Mar alla markii aad hesho magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah, eeg boggayaga Bixinta Khadka tooska ah ee tilmaamaha. Lacagta qadada ee khadka tooska ah waa lacag bixin waqti-dhab ah. Lacag ayaa loo heli karaa ilmahaaga isla marka aad hesho e-mayl xaqiijin ah. Waxaan nahay waax lacag la'aan laakiin waxaan aqbali doonaa jeegag lagu sameeyo Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka. Fadlan ku qor magaca canuggaaga qadka xusuusta ee jeegga.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad magacaaga 'my SSO username or password', fadlan la xiriir Family.helpdesk@minnetonkaschools.org . Haddii aad u baahan tahay caawimaad magacaaga ama lambarkaaga sirta ah ee ' RevTrak' , fadlan la xiriir kristen.turnblad@minnetonkaschools.org ama wac 952-401-5034.
Guuritaanka: Wac 952-401-5034 ama emayl u dir kristen.turnblad@minnetonkaschools.org oo ka tag magaca hore iyo kan dambe ee ilmahaaga iyo cinwaanka aad jeclaan lahayd in laguu soo celiyo. Fadlan ogow: Waaxdayada Bixinta Xisaabaadka waxay qabtaan baaritaanno labadii toddobaadba mar. Haddii tani ay tahay intaad guureyso, fadlan ogow inaad jeclaan lahayd inaan sugno toddobaad ka dibna cinwaankaaga cusub ugu dirno jeegga.
Waayeelka: Dhammaan waalidiinta waayeelka ah waxaa loo soo diri doonaa emayl haddii ardaygooda Sare uu leeyahay isku dheelitirnaan togan maalinta ugu dambeysa dugsiga. Tani badanaa waa maalinta ugu dambeysa ee finalka Senior. Isticmaal iskuxirka kujira emaylka si aad uxulo xulashadaada. Waxaad buuxin doontaa foom gaaban google si aad u soo gudbiso codsigaaga. Dhammaan xisaabaadka ayaa la shaqeyn doonaa ka dib taariikhda kama dambaysta ah ee jawaabta. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan emayl u soo dir: kristen.turnblad@minnetonkaschools.org
Hada waqtigii loogu talagalay 2020 waayeelka waa laga gudbay.
Dhammaan codsiyada beddelka (ka wareejinta lacagta ardayga akoonkiisa mid kale) waxay u baahan yihiin in lagu soo diro emayl ahaan kristen.turnblad@minnetonkaschools.org . Fadlan ku dar magacyada hore iyo kan dambe ee labada ardey iyo lacagta doolarka ee aad jeceshahay in laguu wareejiyo. Waxaad heli doontaa xaqiijin iimayl ah marka wareejinta la dhammeeyo.
Markii koontada ardaygu ay hoos u dhacdo, waalidiinta ayaa heli doona oo si otomaatig ah u soo diri doona farriinta emaylka marka dheelitirka ilmahoodu yahay $ 15 ama ka yar. Haddii aad jeclaan lahayd inaad iska qorto ama aad ka saarto ogeysiisyadan fadlan raac tilmaamahan .
"Lacag celin la aan" waa eray aan isticmaalno marka ardaygu qaadan waayo waxa USDA ay u aragto "qado dhameystiran". Liis kasta oo qado ah wuxuu ka kooban yahay ugu yaraan 5 qaybood: caano, borotiin, badar, miro iyo khudradda. Cunnuggu waa inuu qaataa miro ama khudrad khudradda ah iyo 2 shay oo kale oo kala duwan oo ka mid ah liiska cuntada si ay qadadu u noqoto "qado dhammaystiran". Marka ilmuhu uusan dooran qadada oo dhan, wax lacag ah nama siin doonaan hay'adaha dowladda dhexe iyo kuwa gobolka. Haddii aan dib naloogu soo celinaynin cuntada, waa inaan u gudbinaa kharashyadaas kharashka cuntada ardayga. Qiimaha qadada ee aan dib loo celin karin wuxuu ka tarjumayaa qiimaha dhabta ah ee cuntada. Hawlwadeenadeenu waxay ku hayaan khudaarta iyo xulashada khudradda dheeriga ah diiwaankooda ardayda si ay u qaataan si ay ugu sameeyaan qado dhammaystiran qiimaha ardayga.
Macluumaadka Lacagta Qadada ee Kombiyuutarka
Tilmaamaha Bixinta Qadada ee Khadka Tooska ah
Adeegyada nafaqada /